सरकारको कर असुलीः २ हजार राहत पाउन ५ सय १० रुपैयाँको सिफारिस !
मुख्य पृष्ठप्रदेश समाजसरकारको कर असुलीः २ हजार राहत पाउन ५ सय १० रुपैयाँको सिफारिस !
साउन १०, मोरङ, गत असार २६ मा स्थानीय रतुवाखोलामा आएको बाढीले घर बगाएपछि श्रीप्रसाद दास केवरत घरबाहरबिहीन भए । घर बगेपछि सरकारको आशमा उनी ३५ किलोमिटर टाढा पर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय विराटनगर आएर राहतका लागि सिफारिस बनाउन लागे ।
उनले जिल्ला प्रशासन आउनुपूर्व नै रतुवामाइ वडा नं ३ बाट सिफारीसमार्फत रु ५ सय १० को पूर्जी काटि सकेका थिए । वडाअध्यक्ष कुसनदेवप्रसाद सिंह गनगाईंले बाढीपीडित श्रीप्रसाद दास केवरतसँग सिफारिसपत्रका लागि चर्को शुल्क मागे । र, उनले ऋण खोजेरै भएपनि पूर्जी त काटे तर प्रहरी रिपोर्ट नभएका कारण अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन् ।
पीडित केवरत राहत लिन खाली खुट्टै जिल्ला प्रशासन आएका थिए । तर, प्रशासनले पीडितलाई अधिकतम दुई हजार मात्र राहत दिन सकिने जनाएको छ ।
सहायक सिडिओ उमेश पाण्डेका अनुसार केवरतले दुई हजारसम्म मात्र राहत पाउने छन् । उनले भने, ‘प्रहरी रेकर्ड ल्याए दुई हजार रुपैयाँ राहत दिन सकिन्छ ।’
उनलाई दुई हजार रुपैयाँ राहत पाउन कम्तीमा चार दिन लाग्ने भएको छ । सिफारिस शुल्क र गाडीभाडासमेत गरी उनको झन्डै हजार रुपैयाँ खर्चसमेत हुने भएको छ ।